Usoro na ọnọdụ a ("Usoro", "Agreement") bụ nkwekọrịta dị n'etiti Onye Ọrụ Weebụ ("Onye Ọrụ Weebụ", "anyị", "anyị" ma ọ bụ "nke anyị") na gị ("Onye ọrụ", "ị" ma ọ bụ "gị "). Nkwekọrịta a na-akọwapụta usoro na usoro ị ga - eji were webụsaịtị nke avalanches.com na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya niile ("weebụsaịtị" ma ọ bụ "Ọrụ").
Akaụntụ na otu
Ga-abụrịrị opekata mpe afọ 13 iji webụsaịtị a. Site n'iji weebụsaịtị a na ịnakwere nkwekọrịta a ị na-enye ikike ma na-anọchite anya na ị dịkarịa ala 13 afọ. Ọ bụrụ na ị mepụta akaụntụ na weebụsaịtị, ị ga-ahụ maka ijide nchedo nke akaụntụ gị ma ị na-ahụ maka ọrụ niile na-eme n'okpuru akaụntụ na omume ọ bụla ọzọ metụtara ya. Inye ozi kọntaktị ụgha nke ụdị ọ bụla nwere ike ime ka njedebe akaụntụ gị. Ikwesiri igwa anyi ozugbo banyere ojiji o bula nke akauntu gi n’enweghi ikike ma obu ihe nche ndi ozo. Anyị agaghị enwe ike ịda iwu maka omume ọ bụla ma ọ bụ hapụ, gụnyere mmebi ọ bụla n'ụdị ọ bụla n'ihi omume ma ọ bụ nkwanye ugwu dị otu a. Anyị nwere ike kwụsịtụ, gbanyụọ, ma ọ bụ hichapụ akaụntụ gị (ma ọ bụ akụkụ ọ bụla) ma ọ bụrụ na anyị achọpụta na ịda iwu ọ bụla nke nkwekọrịta a ma ọ bụ na omume gị ma ọ bụ ọdịnaya gị ga-emebi aha anyị na ihu ọma anyị. Ọ bụrụ na anyị ehichapụ akaụntụ gị maka ihe ndị a, ị gaghị edebanye aha ọzọ maka Ọrụ anyị. Anyị nwere ike igbochi adreesị email gị na adreesị ozi ịntanetị iji gbochie ndebanye aha ọzọ.
Ọdịnaya onye ọrụ
Anyị enweghị data ọ bụla, ozi ma ọ bụ ihe ọ bụla ("Ọdịnaya") nke ị nyefere na weebụsaịtị ahụ iji ọrụ ahụ. Ga-enwe ibu ọrụ naanị maka izi ezi, ogo, iguzosi ike n'ezi ihe, iwu, ntụkwasị obi, ihe kwesịrị ekwesị, na ikike ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike iji ọdịnaya niile edobere. Anyị nwere ike, mana enweghị ọrụ, ileba anya Ọdịnaya na weebụsaịtị wepụtara ma ọ bụ mepụta site na iji Ọrụ anyị. Ọ gwụla ma ị nyere gị ikike, ojiji nke weebụsaịtị anaghị enye anyị ikikere iji, mụta, megharịa, gbanwee, bipụta ma ọ bụ kesaa ọdịnaya nke ị mepụtara ma ọ bụ echekwara na akaụntụ njirimara gị maka azụmahịa, ahịa ma ọ bụ nzube ọ bụla yiri ya. Mana ị na-enye anyị ikikere iji nweta, detuo, kesaa, chekwaa, nyefee, gbanwee, gosipụta ma mee Ọdịnaya nke akaụntụ njirimara gị naanị ka achọrọ maka ebumnuche nke ịnye gị Ọrụ ahụ. Na enweghị mmachi na nnọchite ma ọ bụ ikike ndị ahụ, anyị nwere ikike, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ, iji, n'uche nke aka anyị, jụ ma ọ bụ wepu ọdịnaya ọ bụla nke, n'echiche anyị nwere ezi uche, na-emebi iwu anyị ọ bụla ma ọ bụ na-emebi n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ ifọnke.
Anyị anaghị ahụ maka ọdịnaya bi na weebụsaịtị. Agaghị eme ka anyị ghara ịta ụta maka ụfụ ọdịnaya ọ bụla. Ọ bụ naanị ọrụ gị ịkwado ndabere nke Ọdịnaya gị. N'agbanyeghị nke a, n'oge ụfọdụ na ọnọdụ ụfọdụ, na-enweghị ọrụ ọ bụla, anyị nwere ike weghachite ụfọdụ ma ọ bụ data gị niile ehichapụlarị maka ụbọchị na oge ụfọdụ mgbe anyị nwere ike ịkwado data maka nke anyị nzube. Anyị anaghị ekwe nkwa na data ị chọrọ ga-adị.
Mgbanwe na mmegharị
Anyị nwere ikike ịgbanwe Agreement a ma ọ bụ amụma ya metụtara weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ n'oge ọ bụla, na-arụ ọrụ nke ọma na izipu ụdị nkwekọrịta a na weebụsaịtị. Mgbe anyị mere, anyị ga-eziga ngosi na isi peeji nke weebụsaịtị anyị. Ga n'ihu na-eji weebụsaịtị mgbe ụdị mgbanwe ọ bụla ga-abụ nkwenye gị na mgbanwe ndị a.
Nnabata usoro ndị a
Acknow kwenyere na ị gụọla nkwekọrịta a ma kwenye na usoro ya niile. Site n'iji weebụsaịtị ma ọ bụ Ọrụ ya ị kwenyere na nkwekọrịta a ga-agbatị gị. Y’oburu na ikwenyeghi ikwenye n’usoro nke nkwekorita a, enyeghi gi ikike iji ma obu webite webusaiti ya na oru ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Agreement a, biko kpọtụrụ anyị.
Emegharịrị akwụkwọ a na Eprel 12, 2019